दुई मुखे सर्प देख्ने बित्तिकै लाइक गरी कमेन्टमा ॐ लेख्दै सेयर गर्दै जानुहोला.. – Sandesh Press
December 19, 2020 200
यस सर्पलाई वैज्ञानिकहरुले रेड बोआ सर्प नाम दिएका छन् । तपाईलाई थाहाँ छ ? खाडी देशमा यो सर्प खानाले सबै किसीमका बिरामी निको हुने विश्वास गरिन्छ । सथै यो सर्प खाएमा सधै जवान देखिने पनि बताइन्छ ।
खाडीका मुलुकका केही मानिसहरुले यो सर्प खाँएमा ‘यौ’न’ ‘श’क्ति’ बढ्ने पनि विश्वास गर्छन् । यसलाई ‘यौ’न’ ‘श’क्ति’वद्र्ध’क औषधीको रुपमा पनि मान्ने गर्छन् । त्यहाँका मानिसहरु यसलाई औषधिको रुपमा सेवन गर्दै आएको पनि बताइन्छ ।
Prevतिम्रो प्रेमिकाबाट श्रीमतीको रुपमा भएको मेरो परिवर्तन जिन्दगीको सबैभन्दा सुन्दर यात्रा हो : प्रियंका
Nextकोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न बन्द त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आठ महिनापछि खुला ,जय हलेसी महादेव !
मध्यरातमा एकाएक भु,तले थान बाटै युवती गायप पारेपछि झाँ:क्रीले यसरी फर्काए (हेर्नुस भिडियो)
युरोपकै टप युवा इन्भेस्टरको सूचीमा गोर्खाकी अक्सफोर्ड ग्रयाजुएट छोरी